Design ဖန်တီးရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ App တစ်ခု
Image တွေလည်းပါဝင်မှ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Image
Airpod ပျောက်တာကို မြန်မြန်ရှာကြမယ်
Setting > Find My ထဲကိုသွားပြီး Find My iPhone
2022 မှာ SEO အတွက် Effective ဖြစ်စေမယ့် Tips အချို့
Search Engine Optimization (SEO) လို့ခေါ်တဲ့ Digital Marketing တစ်မျိုးက လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ Website တွေကို Google Search Engine ရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရှိနေအောင်ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Website Traffic တွေပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ရလာဒ်ကောင်းတွေရချင်တဲ့ Website တွေဆို SEO လုပ်ထားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု Sharing လုပ်ပေးသွားချင်ထားကတော့ 2022
Posted by Min Thuta/ Thursday June 9th, 2022/ Blog/0Comment
အနာဂတ်မှာ Digital Marketing ကဘာလို့ အရမ်းသုံးလာကြတာလဲ?
Digital Marketing ကိုနောက်ပိုင်းမှာ အထူးတလယ်ဘာကြောင့်သုံးလာကြတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
၁. ဈေးကွက်ကို Real- Time Data တွေနဲ့ စည်းမျဉ်းချနိုင်လာတယ်
၂. App အသုံးပြုမှုတွေ များပြားလာတယ်
၃. Viral Advertising တွေနဲ့ Attention ရယူနိုင်လာတယ်
၄. “Mobile Money” ယနေ့ခေတ်နဲ့ အနာဂတ်အတွက် စံ ဖြစ်လာတယ်
၅. ဈေးကွက်တွေက User Data တွေနဲ့ အခြေခံပြီး
Posted by Min Thuta/ Wednesday June 8th, 2022/ Blog/0Comment
iOS 16 မှာပါဝင်လာတဲ့ Lock Screen Feature များ
Apple ကတော့ ကြီးကြီးမားမား iOS 16 Update ကို ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ iOS User တွေကတော့ ဒီ Update ကို ရင်ခုန်စွာ စောင့်မျှော်နေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ June6ရက်မှာ Release လုပ်ခဲ့ပြီး September မှာတော့ Official ထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဖော်ပြသွားမှာကတော့ iOS
Posted by Min Thuta/ Tuesday June 7th, 2022/ Blog/0Comment
2022 အကောင်းဆုံး Android Game အချို့
2018 မှာ Launch လုပ်ပြီး 2020
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Social Media Marketing Tips အချို့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပိုပြီးတိုးတက် ပြည့်စုံလာစေဖို့အတွက်ဆိုရင် နည်းဗျူဟာကောင်းကောင်းတွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခုလို Digital ခေတ်မှာဆိုရင် ပိုပြီးတောင် သူ့ထက်ငါ နည်းဗျူဟာကောင်းတွေ ပိုပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ Digital Marketing နည်းပညာတွေ အများကြီးထဲမှာမှ Social Media Marketing နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Tips အချို့ကို မိတ်ဆွေတို့အတွက် Sharing လုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်…
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Mission ကို သတ်မှတ်ပါ
Posted by Min Thuta/ Saturday June 4th, 2022/ Blog/0Comment
သိထားသင့်တဲ့ Snapchat Statistic များ
Snapchat ဟာ 2011 မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး လူငယ်တွေကြားထဲမှာ ရေပန်းစားတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်သလို Social Media Marketing မှာလည်း အသုံးဝင်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်း ဒီ Snapchat ကို လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ Social Media တစ်ခုအနေနဲ့ပါ တွဲဖက်အသုံးပြုလာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Snapchat နဲ့
Font ရှာဖွေရတာ အကောင်းဆုံး Website များ
LinkedIn Engagement များလာအောင် ဘလိုလုပ်ရမလဲ?
Social Media Platform တွေကို Smart ကျကျသုံးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Profile ဆိုတာကလဲအရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲ မှာပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ LinkedIn မှာသင့်ရဲ့ Profile ကိုဘယ်လို Engagement ရအောင်ထားသင့်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးပါမယ်…
LinkedIn User တော်တော်များများဟာ Basic Profile
Posted by Min Thuta/ Wednesday June 1st, 2022/ Blog/0Comment